Akụkọ - Gini ga - eme ma ọ bụrụ na agbajiri isi gasị
Igwe injinị isi nke gas na-ere ọkụ na mkpakọ sistemụ ikuku na-abụkarị ọdịda. Cilinda isi gasket Burns ga-akwa njọ na-arụ ọrụ ọnọdụ nke engine, ma ọ bụ ọbụna na-arụ ọrụ, na nwere ike imebi ihe ụfọdụ metụtara akụkụ ma ọ bụ akụkụ; na mkpakọ na ike ọrịa strok nke engine, akara nke elu ohere nke pistin ga-emebibeghị, Ọ dịghị ikuku leakage.
1. Emezighị arụmọrụ mgbe isi gasị gbajiri agbaji
N'ihi ọnọdụ dị iche iche nke isi isi cylinder gbara ọkụ, ihe ịrịba ama nke ọdịda dị iche iche:
gbuo site na etiti abụọ dị nso
N'okpuru ebumnuche nke ịghara ịgbanye nkụda mmụọ ahụ, amaara m jijiji ahụ wee chee na nrụgide dị na cylinders ezughị. Mgbe engine malitere, anwụrụ ọkụ ojii pụtara, ọsọ engine ahụ belatara nke ukwuu, na-egosi ezughi ezu.
2. Isi sịlịnda na-ehi ehi
Mbadamba gas esiri na-agbaba n'ime oghere isi isi ma ọ bụ na-esi na nkwonkwo nkwonkwo nke isi cylinder ahụ na ahụ. Enwere ụfụfụ na-acha odo odo na ikuku ikuku. Mgbe ikuku ikuku dị njọ, ọ ga-eme ụda nke "n'akụkụ", mgbe ụfọdụ mmiri na mmiri na mmanụ mmiri na-apụ. Can nwere ike ịhụ ụgbọelu isi ụgbọ ala cylinder kwekọrọ na gburugburu ya n'oge disassembly na nyocha. Enwere nkwụnye ego carbon doro anya na oghere mkpọchi isi.
3, na uzo mmanu gas
Nnukwu nrụgide gas na-abanye n'ime mmanụ mmanu dị n'agbata ngọngọ engine na isi cylinder ahụ. Mmanụ mmanụ dị na pan mmanụ dị elu mgbe niile mgbe injin ahụ na-arụ ọrụ, viscosity nke mmanụ ahụ na-adịwanye njọ, nrụgide ahụ na-ebelata, na mmebi ahụ na-adịkwa ngwa ngwa. Enwere otutu ochicho na mmanu nke ezigara na akuku elu nke isi cylinder iji mee ka uzo ikuku ikuku.
4, gas dị elu na-abanye na jaket mmiri jụrụ oyi
Mgbe injin mmiri jụrụ oyi dị ala karịa 50 ℃, mepee mkpuchi mmiri ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ na e nwere ikuku ndị doro anya na-ebili ma na-apụta na mmiri mmiri ahụ, a na-ewepụkwa ọtụtụ ikuku ọkụ site na mmiri tank mmiri. Ka igwe njin ahụ ji nwayọ na-abawanye, Ọkụ nke na-ewepụta n'ọnụ mmiri mmiri ji nwayọ nwayọ. N'okwu a, ọ bụrụ na a na-egbochi ọkpọkọ oke mmiri nke mmiri mmiri ma jupụta mmiri mmiri na mmiri na mkpuchi ahụ, ihe a na-ahụ nke egosipụta na-ebili ga-apụta ìhè karị, ihe omume nke esi esi ga-apụta n'ọnọdụ ndị siri ike.
5, cylinder engine na jaket mmiri jụrụ ma ọ bụ ntinye mmanụ na-agabiga
A ga-enwe odo-ojii na-egosipụta mmiri na-ese n'elu mmiri dị elu nke mmiri jụrụ oyi n'ime mmiri mmiri ma ọ bụ na a ga-enwe mmiri doro anya na mmanụ na pan mmanụ. Mgbe ihe abụọ ndị a na-ada site na ihe ịtụnanya, mmiri ma ọ bụ mmanụ ga-adị na nsị.